Sony Xperia P ကို Root လုပ်နည်း - Soe Mobile
2:22 AM | Posted by soe wai lin
htinlinmg: sony experia ray ကို ဘယ်လို root လုပ်နည်းကိုလည်း တင်ပေးပါအုံးနော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။..
ကျွန်တော် လိုက်မွှေရင်းနဲ့ Forum-Xada နဲ့ MM-MPx Team မှာတွေ့ပါတယ်.. MM-MPx Team မှာရေးထားတာတွေကို မူရင်းအတိုင်း ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်...
ကျွန်တော်စမ်းသပ်ထားတဲ့ ဖုန်းက Sony Xperia P v2.3.7 (firmware က 6.0.1.564)
ဖုန်းကိုပထမဆုံး root လုပ်ဖို့အတွက် bootloader ကို unlock လုပ်ရပါမယ်..
ပြီးရင် kernel ကို ချိန်းရပါမယ်..
ဒီနှစ်ဆင့် လုပ်ပြီးရင် root လုပ်ပြီးပါပြီ...
တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်..bootloader unlock လုပ်မယ်ဆိုရင် ဖုန်းနံပါတ်နဲ့လိုချင်တာအကုန်လုံး back up လုပ်ပါ..
"This procedure will wipethe /data partition of your phone, so you will loose all ur stored data, settings. SDCARD will NOT BEWIPED!!! "
၁။ bootloader unlock လုပ်နည်း
bootloader unlock မလုပ်ခင်မှာ မိမိဖုန်းက unlock လုပ်ရမရ အရင်ကြည့်ရပါမယ်..
*#*#7378423#*#* ကိုနှိပ်ပါ ပြီးရင် service info > Configuration > Rooting Status မှာBootloader unlock allowed Yes ဖြစ်နေရင်စလုပ်လို့ရပါပြီ..
သင့် computer မှာ ဒီနှစ်ခုရှိဖို့လိုပါတယ် usb driver and fastboot
usb_driver ကတော့ သင့်ဖုန်းကို driver မရှိသေးရင်တင်ဖို့ပါ.. (ဒီအဆင့်ထိရောက်ပြီဆိုမှတော့ driver တော့တင်တက်မှာပါ)
fastboot folder ကတော့ bootloader unlock လုပ်ဖို့ပါ..
fastboot with android usb file.zip ကို download ဆွဲပြီး တစ်နေရာရာမှာ ဖြည်ထားပါ..
Download Fastboot with Android USB File
အဲဒီအထဲမှာ fastboot နဲ့ usb_driver ဆိုတဲ့ folder နှစ်ခုပါပါတယ်...
အခုသင်ဟာ sony bootloader unlock pageကိုသွားလို့ရပါပြီ... http://unlockbootloader.sonymobile.com/instructions က ညွှန်ကြားချက်တွေဖတ်ပြီးရင် အောက်နားက continue ကိုနှိပ်ပါ.. ပြီးရင်... Are you sure you want to continue? အောက်က yes,i am sure ကိုနှိပ်ပါ.. ပြီးရင် အမှန်ခြစ်နှစ်ခုပေးပြီး Accept ကို နှိပ်ပါ.. ပြီးရင် . Create Unlock request ကိုရောက်ရင် အပေါ်Name..... နဲ့ အောက်ဆုံးEmail..... ကို ဖြည့်ပါ..
ပြီးရင် သင့်ဖုန်း ရဲ့IMEI number ကို *#06# နှိပ်ကြည့်ပြီးမှတ်ထားပါ..နောက်ဆုံးတစ်လုံးကိုဖြုတ် ၁၄ လုံးပဲယူရပြီး အလယ်က IMEI ဆိုတဲ့အကွက်ထဲထည့်ပါ .. Submit ကိုနှိပ်လိုက်ရင် သင့်ဖုန်းအတွက် unlock code ကိုရပါပြီ
သင့်ဖုန်းကို fastboot mode ထဲဝင်ပါ.. ( volume up နှိပ်ပြီး USB ကြိုးနဲ့ ကွန်ပြူတာကိုချိတ်ပါ)
စောစောကဖြည်ထားတဲ့အထဲက fastboot folder ထဲဝင်ပါ shift + right click ခေါက် ပြီး open command window here ကိုရွေးပြီး cmd ကိုဝင်ပါ..
ပထမရိုက်ရမယ့်စာကြောင်းက fastboot.exe -i 0x0fce getvar version (ဖုန်းနဲ့ computer ချိတ်မချိတ်စစ်တာပါ)
ဒုတိယရိုက်ရမယ့်စာကြောင်းက fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xKEY (သင်ရတဲ့ unlock code ကို KEY ဆိုတဲ့နေရာမှာ ထည့်ရမှာပါ) Enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ finish ပေါ်လာပြီးတော့ Bootloader Unlock လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
၂ ။ root လုပ်နည်း
ပထမဆုံးလိုတာကတော့ kernel.elf ပါ
fastboot folder ထဲမှာထည့်ပါ..
fastboot folder ထဲဝင်ပါ shift + right click ခေါက် ပြီး open command window here ကိုရွေးပြီး cmd ကိုဝင်ပါ .. fastboot mode ထဲဝင်ပါ.. ( volume up နှိပ်ပြီး USB ကြိုးနဲ့ ကွန်ပြူတာကိုချိတ်ပါ).. ရိုက်ရမယ့်စာကြောင်းက fastboot flash boot kernel.elf ပြီးရင် power ပြန်ဖွင့် သင့်ဖုန်းက superuser ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ....
သင့်ဖုန်းဟာ root ရသွားပါပြီ..
Update the Samsung Galaxy S3 Mini I8190 to Officia...
Huawei C8650 ကို အဖြစ်တူး Root လုပ်နည်း
Samsung Glaxy S4 Firmware များ
Samsung Glaxy S4(GT-I9500)ကိုClockworkMod Recovery...
iphone5တစ်လုံးအစအဆုံးဖြုတ်တပ်
ှုI phone မှာ Cydia Tweak pattern Lock ဖြည်မယ်။
အကောင်းဆုံး Application များ
Version 2.3မှversion 4.04ထိroot လုပ်နိုင်သောe-root...
C8500 C8600 V2.1 ကို 2.3.7 မြှင့်မယ်
rootမလိုတဲ့မြန်မာဖောင့် (All Samsung)
Samsung Pattern Unlock [Copy link]
ဖုန်းမှာ Origin ပါလာတဲ့ softwares တွေ ဖျက်မယ်
့Hauwei u8860 root လုပ်နည်းလေးပါ
Unsoftbrick Method For Samsung Galaxy Devices [Tut...
Samsung Galaxy S4 Usb debugging mode ၀င်နည်း
Samsung GT-S5360 Root လုပ်နည်း
Y210S & Y210C ကို CWM သွင်းမယ်
Y330-C00 Official Firmware Build Number B117, B123, B127 နဲ့ဆုံးတဲ့ Firmware တွေပါ.. Download Links: Download Multiple Links
Official Firmware ပြန်တင်ရင် Step2မှာ Fail ဖြစ်ဖြစ်နေတတ်တဲ့ error Huawei ဖုန်းတွေမှာ.............. Official Firmware ပြန်တင်ရ...
Honor 3C များအတွက် imei error fixer and version checker in Android Tool
Honor 3C က china နဲ့ international ဆိုပြီး brand2ခုလာပါတယ်။ ဘယ် Brand အတွက်မဆို IMEI ပျောက်သွားတာ၊ SIM မသိတာတွေအတွက် Tool တစ်ခုရထားလို့ ...
Huawei Y-310 firmware တင်နည်း။
Huawei Y310-5000 ကို System Recovery ၀င်နည်းလေးပါ official Firmware က Update.App နဲ့ မလာဘဲ Update.Zip နဲ့ လာတဲ့ အတွက် System Recovery ကနေတ...
အဖြစ်များ တဲ့ Image signature verify fail ဖြေရှင်းနည်း
Huawei C8812/ C8813/ U8818 တွေ မှာ အဖြစ်များ တဲ့ Image signature verify fail ဖြစ်ရင် ရှင်းဘို့ ပါ လုပ်နည်းက လွယ်ပါတယ် လုပ်ချင်တဲ့ မော်ဒယ...
ဒီ Tool လေးကတော့ C8813D နဲ့ Y300C တို့အတွက်သီးသန့်လုပ်ထားတဲ့ Root Tool လေးဖြစ်ပါတယ်…. လိုအပ်ချက်ကတော့ Bootloader Unlock အနေအထားမှာဖြစ်နေရ...
Official Firmware ပြန်တင်ရင် Step2မှာ Fail ဖြစ်ဖြစ်နေတတ်တဲ့ error Huawei ဖုန်းတွေမှာ.............. Official Firmware ပြန်တင်...
Firmware တင်ရင် Update Failed ဖြစ်နေကြတာ တွေ့တော့ ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲ မသိတဲ့သူတွေအတွက်။ ကျွန်တော် တတ်နိူင်သလောက်လေး လုပ်ပေးထားတာလေးပါ။ လိုခ...
Huawei C8813D Firmware Huawei C8813D firmware (C8813D, Android 4.1, Emotion UI, V100R001C92B172, China Telecom) ပုံမှာပြထ...
HUAWEI Y310-5000 ကို Root နည်းနှင့် Root ပြီး Touch Error ဖြစ်သူများအတွက် ဖြေရှင်းနည်းလေးပါ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်.... အရင်ဆုံး လိုအပ်တာလေ...
Soe Mobile © 2013 Supported by Tech Forum - Best Blogger Templates and Premium Blog Templates